"Avy aiza ny ady, ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no iaviany, dia ny filanareo izay miady ao anatin’ny momba ny tenanareo?" Jakoba 4:1
"Efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika." Romana 5:1
Izany no lohatenina tantara an-tsehatra nosoratan’i Jean Giraudoux (1882-1944), taloha kelin’ny Ady lehibe faharoa. Ao anatin’io tantara io dia miezaka fatratra i Hector sy Ulysse hitandro ny fandriampahalemana. Toa ho vitany ihany izany, taorianan’ny fifampidinihany ela dia ela. Saingy nisy fihetsika tsy tokony natao, nampipoaka ny ady. Dia nalahelo i Hector, niteny mafy hoe: «Hipoaka ny ady any Troie».
Ho an’ity mpanoratra ity, dia toa lahatra ny hitrangan’ny ady, izany hoe tsy miankina amin’ny sitrapon’ny olona. Mitambesatra amin’izy ireo ny ady, toa zava-manery avy ety ivelany. Nefa raha manokatra ny Baiboly isika, dia mahita fa ny loharanon’ny herisetra eo amin’ny samy olombelona dia tsy avy ety ivelan’izy ireo, fa ao anatiny! “Fa avy amin’ny fo no ivoahan’ny sain-dratsy, dia ny vonoan’olona, ny fakam-badin’olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampanga lainga, ny fitenenan-dratsy” (Matio 15:19). Faniriantsika ny tsy hisian’ny ady intsony eto an-tany, ary faniriana maha te hidera izany! Fa eo amin’ny fiainantsika, isika ve mba miezaka hanafoana ny fifamaliana, fangidiana, tsy fifanarahana? Ary isika ve vita fihavanana amin’Andriamanitra?
Ny finoana ny Tompo Jesosy no hany lalana azon’ny tsirairay izorana, mba hiainana izany fihavanana izany. Jesosy no Ilay Andrianan’ny fiadanana. Aoka isika hanatona Azy amin’ny alalan’ny finoana, dia hanome fo vaovao antsika Izy, ary hanafaka antsika amin’ny fanahin’ny herisetra, amin’ny alalan’ny Fanahiny. Ka hahatsapa fiadanana vaovao isika, fiadanana lalina ananan’izay mahalala fa vita fihavanana amin’Andriamanitra izy, ary noho izany, mahazo hery koa hihavanana amin’ny namany.